JAPAN CULTURE HOUSE ပိတ်ပြီးနောက်ပိုင်း ညနေ ၆နာရီ ကစပြီး ဂျပန်ရုပ်ရှင်ကို အတူတူကြည့်ကြရအောင်။ ဒီတစ်ကြိမ် ပြသမှာကတော့ '' စကားလုံးတွေရဲ့ ဥယျာဉ် / Garden of Words '' ဆိုတဲ့ အန်နီမေးရှင်းရုပ်ရှင် ပဲဖြစ်ပြီး မနှစ်က ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ '' Kimi no na wa / your name. '' ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ Mr. Makoto SHINKAI ရဲ့ လက်ရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ '' Kimi no na wa / your name. '' မှာလိုမျိုးပဲ ခံစားမှုရသကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်း နဲ့ လှပတဲ့ပုံရိပ်တွေ၊ ဒါရိုက်တာ Mr. Makoto SHINKAI ရဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို မြင်တွေ့ခံစားကြည့်ရအောင်။
ဂျပန်ရိုးရာကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ayatori ကိုိ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလရဲ့ အပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း နံနက်၉နာရီခွဲမှ ညနေ၅နာရီခွဲအထိ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သင်္ကြန်ပိတ်ရက်တွေကြောင့် အချိန်သိပ်မရလိုက်ပင်မယ့် အားလုံးပျော်ရွှင်ခဲ့ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
၂၁၀၇ခုနှစ် ဇွန်လရဲ့ အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း နံနက် ၉နာရီခွဲမှ ညနေ ၅နာရီခွဲအထိ တစ်နေ့လုံး Kendama ကစားနည်းကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အားလုံး အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ ကောင်းကောင်း ကစားတတ်သွားကြပါတယ်။ JCH ဝန်ထမ်းများက သင်ပြပေးခဲ့ပြီး ကစားနည်းအခွေဖွင့်ပြတာကို ကြည့်ရင်း လိုက်ကစားရတာကလည်း ပျော်စရာတစ်ခုပါ။
ခေတ်သစ်ဂျပန်ကို တည်ထောင်ဖို့အတွက် အစွမ်းကို ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တဲ့ Shibusawa Eiichi ရဲ့ အကြောင်းကို ရေးသားထားတဲ့စာအုပ် JCH မှာ ရောက်နေပါပြီ။ လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံတည်ရှိနေတာက သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှုပါ။ အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတဲ့အတွက် တစ်ခါလောက် လာဖတ်ကြည့်ကြပါ။